Dhameystiran: Ganacsiga Xudduudaha Iskudhaafka ah ee Tarjumaadda, Dukaameysiga, illaa Fulin | Martech Zone
Dhameystiran: Ganacsiga Xudduudaha oo Ka Soo Baxaya Tarjumaadda, Dukaameysiga, illaa Fulin
Talaado, Juun 13, 2017 Axad, Disembar 24, 2017 Douglas Karr
Tony Bianco ayaa Naqshadaha si aad ah ayaa looga doonayay Australia muddo ka badan afartan sano, haddana sumadda ayaa ku xannibtay joornaalada adduunka ugu saameynta badan iyo liisaska ugu labbiska wanaagsan moodooyinka Australia. Maanta, dad badan oo caan ah iyo moodello ku yaal Mareykanka iyo Yurub oo dhan ayaa lagu arki karaa iyagoo xiran noocyo kala duwan oo Tony Bianco ah iyo qalab.
Si looga caawiyo dardar-gelinta ballaadhinta caalamiga ah iyo dalabkooda xuduudaha, Tony Bianco wuxuu la shaqeynayaa Pitney Bowes si ay u siiso macaamiil adduunka ku nool oo khibrad u leh adeegsiga internetka. Pitney Bowes oo Dhameystiran solution Xalka Xuduudaha.
Hadda Tony Bianco wuxuu la xiriiri karaa dadka jecel kabaha adduunka oo dhan wuxuuna u oggolaanayaa inay ku bixiyaan lacagta maxalliga ah iyada oo leh kharashyo si buuxda u degay oo la hubo - sidaas darteed wax layaab leh ma ahan marka la keenayo. Dukaameystayaasha caalamiga ah waxay helayaan kabaha ka caawiya inay istaagaan oo astaanta cajiibka ah ee Tony Bianco ayaa noqotay mid caan ka ah adduunka oo dhan.
Raad caalami ah ayaa muhiim noo ah. Waxaan baahi ka qabnaa adduunka oo dhan waxaanan u baahanahay inaan kabahayaga iyo alaabteena u geyno koox suuqyo kala duwan ah. Markaan iskaashi la sameyno Pitney Bowes, waxaan ka iibin karnaa dadka wax ka iibsada in ka badan 150 dal iyo dhulal, tiknoolajiyaddooda dhammaadka-dhammaadkuna waxay macaamiisheenna u siisaa khibrad aan xaddidneyn. Adam Bianco, Agaasime, Tony Bianco
Xalka xuduudaha xuduudaha ee Pitney Bowes ayaa la heli karaa iyada oo qayb ka ah Pitney Bowes Commerce Cloud, karti u leh ganacsiga, siinaya helitaanka xalalka, Analytics iyo API-yada guud ahaan ganacsiga sii socoshada leh xawaare iyo deg deg.
Awoodda Xudduudda oo Dhamaystiran waxaa ka mid ah
Baahiyaha Aaladda Jiilka - Pitney Bows waxay bixin kartaa wax kasta oo ka socda cilmi-baarista macaamiisha illaa ololayaasha suuq-geynta maxalliga ah, taas oo u oggolaanaysa meheraddaada inay ku soo gasho xogtooda sii kordheysa ee dukaamada xuduudaha iyo ka-qaybgalka barnaamijyadooda suuq-geynta ee ka faa'iideysanaya waddooyinka waddanka sida bulshada, raadinta iyo iskaashiyada si loo wado iibka kororka iyo gaadhista sumadda.
Dejinta Website - Tikniyoolajiyadda lahaanshaha ee Xudduudda-xudduudda waxay ka kooban tahay boggaaga gudaha ee 220 waddan oo loogu talagalay hagaajinta beddelaadda macaamiisha. Tarjumaadda, lacagta iyo dalacsiinta u gaarka ah waddanku iyo qiimaha badeecada ayaa lagu daray. Looma baahna in lagu kaco kharash kordhin si loo dhiso loona ilaaliyo goobaha gudaha ama maalgashi loogu sameeyo kaabayaasha maareynta alaabada.
Qiimaha Dhulka & U hogaansanaanta - Adoo dooranaya Pitney Bowes ' Mushaharka la soo diray Ikhtiyaarka (DDP), waxaad siineysaa caddeyn kharash ah macaamiishaada adoo soo bandhigaya waajibaadka dammaanadda leh iyo canshuuraha kahor intaadan iska hubin iyadoo aysan jirin wax la yaab leh oo COD ah marka la keenayo. Pitney Bowes wuxuu qiimeeyaa oo xisaabiyaa buuggaaga wax soo saarka, isagoo xaddidaya meesha ay khuseyso, iyadoo la maareynayo dhammaan howlaha la xiriira u hoggaansamida.
Bixinta & Khatarta - Pitney Bowes wuxuu bixiyaa xulashooyinka caalamiga ah iyo ikhtiyaarrada bixinta ee suuqa, wuxuuna u adeegaa sidii dhoofiyaha diiwaanka iyo xisbigii ugu xiisaha badnaa. Iyo sida Ganacsade Diiwaanka (MOR) waxay maareeyaan dhammaan howlaha lacag-bixinta iyo maaraynta khiyaanada, iyagoo macaamiishooda ka cayminaya deynta xun iyo dib-u-celinta.
Maareynta Saadka - Ka dib markii baakadahaaga loo diyaariyo gaarsiinta caalamiga ah mid ka mid ah xarumaha wax soo saarka gudaha ee Pitney Bowes, waxaa lagu wareejiyaa kuwa xambaara heerka ugu wanaagsan ee shabakadooda caalamiga ah. Waxay gacan ka geystaan ​​baabi'inta walaaca macaamiisha ee ku saabsan kakanaanta iyo kharashyada la xiriira soo-celinta iyagoo maareynaya oo hubinaya badeecadaha la soo celiyey ee xarumaha maraakiibta muhiimka ah ee adduunka. Waxay sidoo kale bixiyaan badbaadin qashin ah waxayna bixiyaan qalab loogu talagalay raadinta xirmo fudud.
Daryeelka Macaamiisha - Ku xooji wakiiladaada adeegga macaamiisha inay ku siiyaan heerka ugu sarreeya ee taageerada qunsuliyadda Pitney Bowes, oo ah codsi adeeg macaamiil oo ku saleysan websaydh si looga jawaabo su'aalaha la xiriira amarka iyo dabagalka macaamiishaada caalamiga ah. Xarumahooda wicitaanada 24/7 waxay kahadlaan 15 luqadood oo la heli karo si looga caawiyo arimaha aadka u adag markay soo baxaan.
Taageero socota - Kooxda kaqeybgalka macmiilka ee 'Pitney Bowes' waxay diyaar u yihiin inay ku siiyaan taageerada aad ugu baahan tahay waxqabadka ganacsiga, warbixinta, horumarinta dhiirrigelinta, iyo falanqaynta, weydiimaha macaamiisha, maareynta soo celinta iyo inbadan. Iyadoo liiska macaamiisha sii kordhaya ee ka badan 300 dukaamada, Pitney Bowes wuxuu leeyahay khibrad iyo khibrad aad ugu baahan tahay si aad ugu guuleysato adduunka.
Tags: Daruurta GanacsigaBuuxiXudduudahadhalinta dalabganacsiga adduunkamadasha ganacsiga adduunkaadeegga macaamiisha adduunkaganacsiga caalamiga ahfulin caalami ahsaadka aduunkalacagaha caalamiga ahtaageero caalami ahturjumaad caalami ahganacsiga caalamiga ahfulin caalami ahsahayda caalamiga ahlacagaha caalamiga ahiibinta caalamiga ahcaalamidegaankamaareynta saadkaPitney Bowestony biancodejinta bogga
Fahamka Macaamiishaada 'Baahiyaha Falanqaynta Saadaasha